Ukugqithisa ngodongwe olucoca
Naliphi na ibhinqa ngokuqinisekileyo kungekho kanye ebomini bakhe beva malunga ne-wraps kunye nodongwe olucokisekileyo. Ukuhluka kwale nkqubo, okanye kunokuba isithako esiyinhloko sinokuba luninzi. Abaninzi abasetyhini basebenzisa ubumba buluhlaza, kuba kuthathwa njengokuphilisa, kwaye ngamanye amaxesha imimangaliso. Ngoko yintoni ekugqibeleni kwaye kwenzeka ntoni usebenzisa udongwe?
Ukugqitywa kukuba, mhlawumbi, inkqubo enomdla kakhulu kwiinkqubo ze-SPA-salons. Umzimba usetyenziswe into ethile eyenza ukuba ingene kwiindawo zokwakheka kwesikhumba, ine-effect andrapeutic effect. Ukugqitywa kungenziwa ngokubini ngoncedo lwodaka lwezokwelapha, kunye necolethi, ubusi, udongwe kunye nezinye izithako. Ilayini iqulethe inamba enkulu kakhulu yamacandelo ancedo: iivithamini, amaminerali (ngokukodwa, i-calcium, i-phosphate, isinyithi, njl.). Kuba inkqubo yokugcoba kuyinqwenela ukhetha ubumba obomvu okanye obumnyama - ezi ntlobo zobumba zizona zixhobo ezibalulekileyo kwaye azikhange zichasene nesicelo.
Ukugubungelwa ngodongwe olucokisekileyo, kunye naluphi na olunye, kufuneka lwenzeke ngokwemiqathango ethile, oku kulandelayo okuza kubonelela ngempumelelo enkulu kwinkqubo. Okokuqala, ngaphambi kokufaka udongwe, ulusu kufuneka luhlanjululwe ngokupheleleyo kuzo zonke iintlobo zokungcola. Kungcono ukuba wenze lula ukukhawuleza ngoncedo lwe-scrub. Oku kuya kunceda ukususa ebusweni beengqungquthela zesikhumba ezithintela ulusu olukhusela ukungena kakuhle kwezinto ezisetyenziswayo.
Okokuqala, lungiselela ukwakheka kwento. Sebenzisa nayiphi na isitya, ngaphandle kwesinyithi. Ngenxa yoko, udongwe kufuneka luhlanjululwe ngamanzi kwi-pasty state. Amanzi okuzalisa kungcono ukuthatha amaminerali - incedo ngakumbi. Ukuba akukho nto yokusetyenziswa kwamanzi amaminerali, kunokwenzeka ukuba uthathe i-thaw. Ukuthatha okuqhelekileyo akukhuthazwayo, kuba kunokungcola kakhulu. Esikhundleni samanzi, ungasebenzisa kwakhona i-decoction yamachiza amayeza. Akufuneki ukuthetha, umxube onjalo uya kuzisa ezinye iinzuzo? Ukufa ngaphambi kokuba kuzalwe kulungele ukuhluthwa kuzo zonke iintlobo zamagqabha kuyo (abayi kuchithachitha emanzini kunye nobunzima obufanayo buya kusebenza). Unokongeza amaconsi ambalwa eoli efunekayo kumxube.
Umaski wokulala kunye nesicelo sayo
Ngoku, eqinisweni, malunga nokusebenzisa udoti lobumba. Emva kokuba ugqabise isikhumba, supha iinqwelo ze-scrub ngokucokisekileyo, uze usebenzise ubumba obunzulu kulusu. Emva koko, kuyimfuneko ukugubungela ngokucophelela indawo yokwenza udongwe ngefilimu. I-Polyethylene iya kufuna kakhulu, kuba udongwe lunepropati yokudibanisa kwesikhumba kunye nokuphuma. Emva koko, kufuneka ugobe indawo yengxaki ngento efudumeleyo. Ngenye indlela, unokwazi ukulala phantsi kwengubo engamashumi amane okanye iyure. Ukuba udonga lwebumba lusetyenziselwa ukulwa ne-cellulite, unokugqoka iifutshane ezichasene ne-cellulite kunye nokuzivocavoca, ugijime kwi-treadmill, wenze imisebenzi eyahlukeneyo, ngoko umphumo wenkqubo uya kuba mkhulu. Emva kokuba inkqubo iphelile, udongwe kufuneka luhlanjululwe ngamanzi afudumele, kwaye usebenzise ukhilimu elukhumbeni. Kukulungele ukuqedela inkqubo nge-sauna. I-sauna iya kunceda ukulahla yonke i-slag eqokelele emzimbeni, kwaye ekulweni ne-cellulite kunye nobunzima obuninzi kuya kusebenza ngokukodwa. Emva kwe-sauna, gqoba iingubo ze-terry kwaye ujabulele ukuphumla okumnandi. Ngendlela, unokutyelela i-sauna ngaphambi kokugubungula, ngoko umphumo uza kudlulela konke okulindelweyo. Ukongezelela, emva kokugquma, kukuhle ukuhlalisa zonke iindawo zengxaki. Kule ngongoma, kuya kusebenza ngokukodwa.
Yenza inkqubo yokugubungela ngobuncwane bodongwe mhlawumbi kanye okanye kabini ngeveki. Kwaye ikhosi kufuneka ihlale iinyanga ezimbini, ngoko unokuyonwabela ngokupheleleyo umphumo. Emva koko, emva kweenyanga ezimbini, kufuneka uyenze i-wraps yokukhusela okungenani kanye ngenyanga.
Ukususela kwiProvence ngoLuthando: Ukuqokelela iJunie ye-L'Occitane Limited Edition
Ungalususa njani ukucaphukisa emva kokucheba kwi-bikin zone?
Isaladi kunye nenkukhu kunye neziqhamo kwi-sauce yesardard
Izindlela zokususa iinwele ezingabonakaliyo
Isondlo esifanelekileyo sokulahlekelwa isisindo
Iipropati ezisebenzayo zeTioibos tea
Indlela yokufunda ukuba ungayisebenzisi yonke imali: iimpazamo eziphambili
Ukubunjwa kwodongwe lwepolymer